February 17, 2020 | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
महरा निर्दोष रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला : आजै रिहा हुने
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा निर्दोष रहेको फैसला गरेको छ । बलात्कार प्रयासको आरोपमा पुर्पक्षमा डिल्लीबजार कारागार रहेका महरा आजै रिहा हुने भएका छन् । न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरा निर्दोष रहेको फैसला गरेको हो । महराविरुद्ध सरकारी वकिलले र महराको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, डा. दिनमणि पोखरेल, कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, लव मैनाली, मुरारी सापकोटालगायतले बहस गरेका थिए । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महरा पक्राउ परेका हुन् । उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने…
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–३ मदन चोकस्थित शङ्कर मन्दिर परिसरमा हनुमानको पूर्णकदको मूर्ति निर्माण भइरहेको छ । मदन चोकका स्थानीय समाजसेवी द्रोणप्रसाद जैसीको व्यक्तिगत लगानीमा मूर्ति निर्माण भइरहेको हो । दुई वर्षअघि निर्माण शुरु गरिएको मूर्तिको करीब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । शङ्कर भगवान मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जैसीले आफ्ना स्व मातापिताको सम्झनामा मन्दिर परिसरमा हनुमानको पूर्णकदको मूर्ति निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मदन चोकको शङ्कर मन्दिरको परिसरमा निर्माण भइरहेको हनुमानको मूर्ति नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसको उचाइ ७५ फिट छ । धार्मिक क्षेत्रका रुपमा रहेको…
यसै वर्ष १८ औं सिजनमा पुग्न सफल अमेरिकन आइडलको नयाँ भाग भने अरू बेलाभन्दा केही खास रह्यो। पहिलो भाग सुरू भएलगत्तै अडिसनमा सामान्य अमेरिकीभन्दा फरक अनुहारका व्यक्ति जजहरूलाई नमस्ते भन्दै उपस्थित भए। जजको टेबलमा बसेका चर्चित अमेरिकी गायक लियोनेल रिचीले उनको परिचय सोध्दा उनले आफू नेपाली रहेको बताए। ‘मेरो नाम दिवेश पोखरेल हो र काठमाडौंमा जन्मे-हुर्केको हुँ,’ गाढा हरियो सर्ट लगाएर गितार भिरेका उनले भने, ‘स्टेजमा मेरो नाम अर्थर गन हो।’ दिवेशले अंग्रेजीमा आफ्नो परिचय दिँदै गर्दा लोकप्रिय गायिका क्याटी पेरीले उनको नामको अर्थ सोधिन्। दिवेशले ‘यसको अर्थ प्रकाश हो’…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् । सोमबार बिहान महाराजगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत प्रणालीबाट विद्युत वितरण गर्ने तयारी थालेको हो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भूमिगत विद्युत वितरणबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए । महाराजगञ्जअन्तर्गतका बालुवाटार, पानीपोखरी, बूढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, समाखुशी, धापासी, बसुन्धरा, शिवपुरी, चुनिखेल, सुकेधारा, धर्मस्थली, शिक्षण अस्पताललगायतका स्थानहरुमा ११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गरिने र २५० किलोमिटर अप्टिकल…
ओखलढुंगामा दु’र्घटनामा ३४ को मृ’त्यु, १०७ घा’इते
ओखलढुंगा : जिल्लाको चम्पादेवी गाउँपालिका-५ सिद्धडाँडामा गत माघ १३ मा जिप दु’र्घटना भयो। उक्त दु’र्घटनामा उपचारका लागि सामुदायिक अस्पताल ओखलढुंगा हिँडेका ५५ वर्षीय सन्तोष विश्वकर्माको घटनास्थलमै मृ’त्यु भयो। चालकसहित अन्य तीन जना ग’म्भीर घा’इते भए। बा२१च ७३६१ नम्बरको बोलेरो दु’र्घटनाबाट घाइते तीनैजनालाई उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं लगियो। दुर्गमा गाउँमा पछिल्लो समय सडक पुगेसँगै एकातिर सर्वसाधारणलाई सुविधा महसुस भएको छ भने अर्कातिर दु’र्घटनाको जो’खिम पनि उत्तिकै छ। सडक असुरक्षाकै कारण यात्राका क्रममा कुन बेला दुर्घटनामा परिएला कि भन्ने मनमा त्रास बोकेर हिँड्न बाध्य छन् स्थानीय। तीन वर्षमा ५८ दु’र्घटना, ३४ को…
महरा प्रकरण : अन्तिम फैसलाका लागि महरा जिल्ला अदालतमा उपस्थित
काठमाडौं । बलात्कार प्रयासको आरोप लागेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणको अन्तिम फैसला केहीबेरमा हुँदैछ । अन्तिम फैसलाका लागि महरालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं ल्याइएको छ । आइतबार दुवैपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा महरा पुर्पक्षका लागि हाल डिल्ली बजार कारागारमा छन्। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासमा पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसायीले आइतबार अन्तिम बहस गरेका थिए । महराविरुद्ध सरकारी वकिलले र महराको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, डा.दिनमणि पोखरेल, कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, लव मैनाली, मुरारी…
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको मुद्दा आइतबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । बहस सकिएलगत्तै अन्तिम आदेश आउने पर्खाइमा रहेका महराले आफन्तसँगको कुराकानीका क्रममा ठट्टा गर्दै अदालतबाट फैसला भइसकेको र आफु २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको बताएका थिए । दुवै पक्षबाट बहस सकिएपछि इजलासको बाहिरपट्टि बरण्डामा बसिरहेका महरालाई आफन्तले के भयो ? भनेर सोधेका थिए । प्रतिउत्तरमा ठट्टा गर्दै महराले भने, ‘फैसला भैसक्यो, अब २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने भयो । मेरोविरुद्ध थाहा पाइहाल्नुभएको छ नि ।’ कालो ज्याकेट र ढाका टोपीमा उपस्थित भएका महरा हँसिलो अनुहारमा थिए । उनले…
५ फागुन, काठमाडौं । कुनै समय चर्चाको शिखरमा थियो हास्य टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने टेलिश्रृंखलाले गाउँदेखि शहरसम्मका दर्शकको मन जितेको थियो । मेरी बास्सै’ अगाडि ‘तीतो सत्य’ र ‘जिरे खुर्सानी’ कमेडी खुराक पस्किरहेका थिए । यी दुवै सिरियलले शहरिया जनजीवनको कथा भन्थे । तर, ‘मेरी बास्सै’ले टिपिकल ग्रामीण परिवेशलाई हास्यकथामा उनेपछि दर्शकले नयाँ टेस्ट पाए । फलतः दीपकराज गिरीको ‘तितो सत्य’ र शिवहरि पौडेल–जितु नेपालको ‘जिरे खुर्सानीलाई उछिन्दै टेलिभिजन रेटिङमा ‘मेरी बास्सै’ अगाडि आयो । हुन त सुरुवाती पाँच एपिसोडमा ‘मेरी बास्सै’ पनि शहरी कथामा नै…
दिनरात मेहेनत गरेर पढ्ने र जागिर खाने प्रायः नेपाली युवाको सपना नै रहने गरेको छ । निजामतीसहितका विभिन्न सेवा, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायहरूमा सरकारी जागिरको अवसर प्राप्त हुन्छ । सरकारी जागिरमा एक पटक नाम निकालिसकेपछि हत्तपत्त जागिर छाड्ने गरेको पाइन्न, तर नेपाली सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने त्यो लागू हुँदैन । अहिले नेपाल प्रहरीमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्नेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेका वर्ष जगिर छाड्नेहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ हजार ५ सय ६४ जनाले…
कोरोनाका कारण ४ लाख ८० हजार अमेरिकीको निधन.......